अमेरिकाले चीनलाई जवाफ दिन सक्छ ?-CRI
यदि अमेरिका चीनसँग सम्बन्ध सुधार गर्न चाहन्छ भने ऊसँग भएको अति गलत बुझाइ र खतरा नीतिलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ। चीन अमेरिका सम्बन्ध निकै कठिन अवस्थामा पुगेको छ। दुई ठूला अर्थतन्त्र र ठूला मुलुकले आफ्नो जिम्मेवारीलाई राम्ररी बहन गर्नुपर्छ। यो चीन र अमेरिकाको हितमा मात्र नभई समस्त विश्वको हितमा पनि छ।
उल्लिखित अंश कुनै प्रोफेसर अथवा विश्लेषकले भनेको नभई चिनियाँ उपपरराष्ट्रमन्त्री स्ये फङले अमेरिकी समकक्षी वेन्डी रुथ शेर्मानसँगको वार्तामा भन्नु भएको हो। चीन र अमेरिकाबीचमा बढ्दो तनाव र द्वन्द्वलाई कम गर्नका लागि अमेरिका सच्चिनुपर्ने माग चीनले राख्दै आएको छ। यो चिनियाँ परराष्ट्र मन्त्रालयको महत्वपूर्ण र आधारभूत निर्देशिका जस्तै बनेको छ।
जुलाइ २६ (साउन ११ गते) सोमबार बिहान चीनका उप-परराष्ट्रमन्त्री स्ये फङले चीनको राजधानी पैचिंग नजिकै थिआननचिन नगरमा अमेरिकी उपविदेशमन्त्री वेन्डी रुथ शेर्मानसँग वार्ता गर्नुभएको छ। पछिल्लो समय बाइडेन सरकारले चीनको आन्तरिक मामिलामा हस्क्षेप गर्ने गरी विभिन्न नीतिहरु अगाडि सार्दै आएको परिप्रेक्ष्यमा यो भेटलाई विश्व कुटनीतिमा निकै महत्वका साथ हेरिएको छ।
सन् १९४९ मा जन्मिएका वेन्डी शेर्मान अमेरिकाकी गिनेचुनेकी कुटनीतिज्ञ हुनुहुन्छ। उहाँलाई अमेरिकी राज्यको डेपुटी सेक्रेटरी भनिन्छ जुन उपविदेशमन्त्री पनि हो। उहाँ बिल क्लिन्टनको समयमा अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। उहाँले अमेरिकाको उत्तर कोरिया हेर्ने विभागको नेतृत्व गर्दै आउनु भएको छ। उत्तर कोरियाको आवणिक हतियार सम्बन्धमा अमेरिकी वार्ता टोलीमा बसेर काम गरिसकेकी शेर्मानले इरानको आवणिक वार्ताको पनि नेतृत्व गरिसक्नु भएको छ। जो बाइडेनले अप्रिल १४ तारिखमा शेर्मानलाई उपविदेश मन्त्रीमा नियुक्त गर्नुभएको हो।
अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट्रपति भएपछि चीन र अमेरिकाबीचमा द्वन्द्व बढ्न थालेको हो। दुई ठूला मुलुक र ठूला अर्थतन्त्रबीचको द्वन्द्वले अन्य मुलुकलाई पनि प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रुपमा प्रभाव पारेकै छ। डोनाल्ड ट्रम्पपछि जो बाइडेन अमेरिकाको राष्ट्रपति भएपछि दुई देशबीचको सम्बन्धमा सुधार आउने अपेक्षा गरिएको थियो। तर जो बाइडेन राष्ट्रपति भएको आधा वर्ष बित्न लाग्दा पनि उल्लेख्य सुधार भएको देखिँदैन। पछिल्लो समयमा अमेरिकाले हङकङमा कार्यरत केही चिनियाँ अधिकारीमाथि प्रतिबन्ध लगाएको छ भने जवाफस्वरुप चीनले पनि केही अमेरिकीमाथि प्रतिबन्ध लगाएको छ।
द्वन्द्व बढिरहेको समयमा दुई देशका उपविदेशमन्त्रीबीचको वार्तामा केकस्ता कुराहरु भए भनेर सोमबार नै चिनियाँ परराष्ट्र मन्त्रालयले पैचिंगमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा व्याख्या गरेको छ। पत्रकार सम्मेलनमा चिनियाँ तथा विदेशी पत्रकारहरुले सोधेका प्रश्नको उत्तर दिँदै चीनको परराष्ट्रमन्त्रालयका प्रवक्ता चाउ ली च्येनले भेटको अन्तर्यको व्याख्या गर्नुभएको हो। प्रवक्ता चाउले दुई देशबीचमा भ्रमण आदानप्रदान जारी रहेको र चीन-अमेरिका सम्बन्धमा चीनको मनोवृत्ति र धारणा प्रकट गर्नुका साथै दुई पक्षीय हित र साझा रूचिका विषयबारे गहन बैचारिक आदान(प्रदान भएको जानकारी दिनुभयो।
जलवायु परिवर्तन, इरान आणविक र उत्तर कोरिया आणविक समस्यालगायत विषयबारे अमेरिकाले चीनसँग सहयोग र समर्थनको अपेक्षा गरेको भन्दै अमेरिकी उपविदेशमन्त्री शेर्मानले समकक्षी स्येसँग याचना गर्नुभएको प्रवक्ता चाउले बताउनु भयो।
अमेरिकाले चालेका विदेश नीति तथा कार्यक्रममा आफ्नो गठबन्धन इतरका राष्ट्रसँग हम्मेसी समर्थन खोज्दैन। त्यसमाथि विविध नीतिबाट चीनलाई समेत आंशिक नाकाबन्दी लगाउँदै आएको अमेरिकाले चीनसँगै सहयोगको आशा गरेर प्रस्ताव गर्नुलाई अन्तर्राष्ट्रिय समाजले निकै महत्वका साथ हेरेको छ। शेर्मान इरान र उत्तर कोरिया आणविक मामला वार्तामा अमेरिकाको नेतृत्व गर्दै आएकी व्यक्ति हुन्। यी दुई विषयमा चीनको भूमिकालाई अमेरिकाले नजर अन्दाज गर्न सक्दैन।
सो वार्तामा चीनले दुई देशबीचको सम्बन्धबारे आफ्नो अडान प्रस्तुत गर्दै चीनमाथिका अमेरिकी गलत बुझाइ र नीति रोक्न ताकिता गरेको कुरा प्रवक्ता चाउले पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिनुभयो। अमेरिकाले पछिल्लो समय कोभिड-१९ भाइरस स्रोत, ताइवान, सिन्च्याङ, हङकङ, दक्षिण चीन सागरलगायत विषयमा चीनको बदनाम गर्दै आएको छ। यी विषयमा आफ्नो लगत भनाइ र कार्य रोकेर चीनको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप तत्काल रोक्न चीनले अमेरिकालाई आग्रह गरेको छ।
वार्ताका क्रममा चिनियाँ उपपरराष्ट्र मन्त्री स्येले चिनियाँ संस्कृतिमा एकाधिकारको जीन नभएको र कुनै पनि मुलुकलाई जबरजस्ती नगरेको स्पष्ट पार्नुभयो। जबरजस्ती कुटनीतिको आविष्कार, प्याटेन्ट अधिकार र त्यसको बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार अमेरिकाको भएको भनेर उहाँले समकक्षी अमेरिकी शेर्मानलाई चोटिलो व्यङ्ग्य प्रहार गर्नुभएको छ। एकपक्षीय प्रतिबन्ध लगाउने र आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने काम अमेरिकाको नीति रहेकाले यस्ता कार्य अमेरिकाले सच्याउनुपर्ने अडान पनि उहाँले राख्नुभयो। शान्तिप्रिय चिनियाँ जनताले पारस्परिक सम्मान, निष्पक्षता, न्यायिक र सहयोगात्मक तथा साझा विजयका नयाँ ढाँचाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई सक्रियताका साथ अगाडि बढाएको भन्दै यस्ता कुरामा अमेरिकी धारणा के छ भनेर प्रश्न सोध्नु भएको थियो। के अमेरिका चीनसँगै एउटै दिशातर्फ हिँड्न, पारस्परलाई सम्मान गर्न, निष्पक्ष रुपमा प्रतिस्पर्धा गर्न र शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वमा रहन सक्छरु चिनियाँ प्रश्नमा अमेरिकी कुटनीतिज्ञ शेर्मानले ठोस जवाफ दिन सक्नु भएन।
एक स्वस्थ र स्थिर चीन नै चीनअमेरिका सम्बन्धमा दुई पक्षीय हितसित अनुकूल हुनुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय समाजको साझा अपेक्षा रहेको चीनले बताउँदै आएको छ। सो वार्तामा पनि अमेरिकालाई चीनले मानव अधिकार र प्रजातन्त्रको जवाफ पनि दिएको छ। स्येले भन्नुभयो, “सबैभन्दा पहिले अमेरिकाले आफ्नो मानव अधिकार समस्याको समाधान गर्नुपर्छ।” उहाँले भन्नुभयो “इतिहासमा अमेरिकाले आदिवासीहरुको नरसंहार गरेको थियो। वर्तमानमा पनि अमेरिकाले महामारीविरुद्ध चालेका नकारात्मक कदमले ६ लाख २० हजार अमेरिकीको मृत्यु भइसकेको छ। अमेरिकाले विश्वमा झुटो लडाइँ चलाएर गम्भीर प्रकोप सिर्जना गरेको छ। यस्तो अवस्थामा पनि अमेरिकाले आफूलाई विश्वको प्रजातन्त्र र मानव अधिकारको प्रवक्ता भन्न अमेरिकासँग के योग्यता छ ?” प्रजातन्त्र र मानव अधिकारबारे चीनसँग छलफल गर्न अमेरिका योग्य नभएको पनि उहाँले औल्याउनु भयो। पश्चिमा जनमत सर्वेक्षण उल्लेख गर्दै चीन सरकारप्रति चिनियाँ नागरिकको सन्तुष्टि ९० प्रतिशतभन्दा बढी रहेको पनि स्मरण गराउनु भयो। केही समय अगाडि अमेरिकी हार्भड विश्वविद्यालयले गरेको सर्वेक्षणमा चीन सरकार र चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीप्रति ९५ प्रतिशत चिनियाँ जनता सन्तुष्ट गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको थियो।
गत मार्च १९ तारिख सम्पन्न भएको चीन अमेरिका उच्चस्तरीय रणनीतिक वार्तामा पनि चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी केन्द्रीय समितिको वैदेशिक मामिला कार्यालयका प्रमुख याङ चेछले अमेरिकाको यसैगरी झाँको झार्नुभएको थियो। अमेरिकी समकक्षीलाई हाकाहाकी चुनौति दिएको भिडियो अहिले पनि युट्युबमा देख्न सकिन्छ। चिनियाँ नेता याङले वार्तामा बसेका अमेरिकी समकक्षी आन्टोनी ब्लिङकेनतिर औँला ठड्याउँदै भन्नुभएको थियो, “अमेरिकासँग चीनका अगाडि बोल्ने कुनै योग्यता छैन। अहिले मात्र होइन २० अथवा ३० वर्ष अगाडि पनि अमेरिकासँग यस्तो योग्यता थिएन। यदि अमेरिका चीनसँग वार्ता गर्न चाहन्छ भने अमेरिकाले आवश्यक प्रोटोकल र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताहरुलाई अनुसरण गर्नुपर्छ।” सोही वार्तामा सहभागी पत्रकारलाई अमेरिकाले बस्न नदिएपछि चिनियाँ नेता याङले भन्नुभएको थियो, “पत्रकार बस्ता के बिग्रन्छ। तपाईंहरु त मानव अधिकार र सूचनाको खेती गर्ने पक्ष होइन र ? फेरि पत्रकारसँग अमेरिका किन डराउँछ ?
थिआनचिनमा भएको चीन अमेरिकी उपविदेशमन्त्री भेट-वार्तामा अमेरिकाले संरक्षण गरिरहेको कथित नियममा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय परिपाटी आफू र केही पश्चिमा मुलुक बीचको संगाति नियमहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको रूपमा लान र अन्य मुलुकमाथि दबाव दिन प्रयोग गरिने भएको पनि चिनियाँ नेता स्येले बताउनु भयो। अहिले अमेरिका सर्वत्र आलोचित र अलोकप्रिय बन्दै आएको छ। यस्तो अवस्थामा उसले आफ्नो गुमेको प्रभाव र स्वार्थका लागि कथित नियम र मापदण्डको भारी बोकाइ रहेको भन्दै स्येले अमेरिकी नीतिको कडा आलोचना गर्नु भएको छ।
चीनमाथि अमेरिकाले केकस्तो नीति लिएको छ भन्ने कुरा पनि स्येले अमेरिकी समकक्षी शेर्मानलाई बुझाइदिनु भएको छ। अमेरिकाले प्रतिस्पर्धा, सहयोग र द्वन्द्व तीनवटा उपाय प्रयोग गर्दै चीनमाथि दबाव दिइरहेको प्रकाश पार्नुभएको थियो। द्वन्द्व अमेरिकाले चीनमाथि लागू गरिरहेको नीतिको वास्तविकता हो भन्दै सहयोगका नाममा वर्तमान समस्याको समाधान तरिका रहेको र प्रतिस्पर्धा शब्दजाल भएको उहाँले व्याख्या गर्नुभयो। अमेरिकाले चीनसँग आवश्यक पर्दा सहयोग माग्छ तर आफू माथि परेपछि आपूर्तिलाई बन्द गरी नाकाबन्दी लगाउने गर्छ। चीनलाई रोक्न अमेरिकाले द्वन्द्व उठाउँछ आफ्नो हितमा मात्र अमेरिका केन्द्रित भन्दै उहाँले अमेरिकी नीतिको जोडदार विरोध गर्नुभयो। चीन-अमेरिका सम्बन्धमा अवरोध आउनुको मुख्य कारण केही अमेरिकीहरूले चीनलाई काल्पनिक शत्रु मानिरहेकोले हो भन्दै यस्तो भ्रम अमेरिकाले तुरुन्तै फाल्नु पर्ने आग्रह पनि गर्नुभयो। अमेरिकाले चीनलाई काल्पनिक शत्रु बनाएर राष्ट्रिय उद्देश्य पुनर्स्थापन गर्दै आन्तरिक राजनीति, अर्थतन्त्र र समाजप्रति अमेरिकीहरूको असन्तोषलाई अन्यत्र मोड्न खोजिरहेको छ। यसको गहिरो लक्ष्य के हो भने अमेरिकामा विद्यमान अन्तर्विरोधका समस्यालाई चीनमाथि फ्याकिदिएर अमेरिकी राजनीतिज्ञहरु पानीमाथि ओभानो बन्न खोजिरहेका छन्।
स्ये र शेर्मानबीचको वार्तामा चीनले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिन अमेरिकालाई सजिलो छैन। अमेरिका दिनप्रतिदिन समस्यामा जेलिँदै आएको छ र ती समस्याबाट बच्नका लागि एकपछि अर्को झुटको सहारा लिँदै आएको छ। अब चीनले मात्र होइन अन्तर्राष्ट्रिय समाजले समेत अमेरिकामाथि औँला ठड्याउन थालेका छन्।